Scratchpad Command: Iyo Inokurumidza Nzira Yekuwana uye Gadziridza Salesforce Kubva Chero Webhu App | Martech Zone
Vatungamiriri veAccount mune angangoita ese masangano ekutengesa akazadzwa nematuru ekutengesa maturusi akaisirwa kubva kwavari CRM. Izvi zvinomanikidza vatengesi kupinda mukudya nguva uye kunetesa kwekufamba-famba pakati pezvishandiso, kubata akawanda emabhurawuza matabhu, monotonous nekudzvanya, uye kunetesa kutevedzera uye kunama, zvese panguva imwe chete panguva imwe chete kuyedza kugadzirisa Salesforce. Nekuda kweizvozvo, pane kuderera kwekushanda kwezuva nezuva, kugadzirwa, uye, pakupedzisira, nguva yevatengesi kuti vaite mabasa avo-kutengesa.
Scratchpad Raira yakatanga, kuvhura nzira inokurumidza kwazvo yevatengesi kuti vawane nekuvandudza zvinyorwa zvavo zvekutengesa, mabasa, uye Salesforce, pane chero webhu kunyorera kana nharaunda yekutengesa - mahara.
Mushure mekutaura chaiko nezviuru zvevatariri veakaundi kubva kumasangano ekutengesa eese saizi, isu takadzidza kuti ivo vanoshandisa inopfuura hafu yenguva yavo kuvandudza Salesforce pane kutengesa. Vatungamiriri veAccount vanongoda kumutsiridza Salesforce nekukurumidza vasina kushandura mamiriro uye kutyora kwavo kufambiswa, kuti vagone kutaurirana zvakanyanya nevatengi uye kuvhara mamwe madhiri. Scratchpad Command inogonesa mushandisi wese weSalesforce paPasi kuti agadzire zvakafanira zvavanoda, kubva kune chero webhusaiti, vasina kushandura tabo, mahara. Inokurumidza. Zviri nyore. Uye zvinofadza kushandisa.
Pouyan Salehi, co-muvambi uye CEO weScratchpad
NeScratchpad Command, mukubaya kamwe chete, vashandisi vanogona kugadzira nhare nyowani, account, mukana, basa, kana chiitiko uye voita gadziriso kune chero tsika munda kana chinhu muSalesforce. Vatungamiriri veAccount vanogona kugadzira, kugadzirisa uye kuyananisa akakosha madhizaini kubva chero kupi, kubvisa kudiwa kwekutombopinda muSalesforce chaiko, kubhejera pakati pezvimwe zvekushandisa zvekutengesa, kana kuremerwa nekukopa uye kunamatira kubva kuchimwe chikumbiro kuenda kune chimwe.
Scratchpad Command inogona zvakare kushandiswa uko vatungamiriri veaccount vanopinda munharaunda dzekutengesa, vachivabatsira kuvandudza Salesforce vachibatana nevezera ravo nevavanoshanda navo chero paInternet. Pamusoro pezvo, vatungamiriri vekutengesa vanobatsirwa nekukasira kuwana dhairekitori reSalesforce pavanenge vachishanda mukati mezvinodiwa zvavo zvekufungidzira uye masisitimu eBI, kana tsika-yakavakirwa mukati mekupa dhibhodhi.
Vatengi vanogona kuisa Scratchpad se Chrome plug-in, batanidza ku Salesforce uye woita zvigadziriswe mumapombi avo mumasekondi makumi matatu kana mashoma. Scratchpad inobatanidza ipapo ku Salesforce uye inopa vatengesi chimiro chinokurumidza uye chazvino kuti vabatanidzwe nedata ravo rekutengesa uye workflows. Salesforce inoramba iri dhatabhesi rekodhi, ukuwo Scratchpad ichishanda senzvimbo yekubatana iyo zvikwata zvemari zvinonakidzwa nekushandisa.
Kana zvasvika kune vamiririri vekutengesa, hapana chinorira chiri chechokwadi kupfuura chirevo nguva imari. Uye kana nguva iyoyo (nemari) zvadimburwa nepakati nekuda kwekukanganisa kunokonzerwa nezvose zvishandiso nemashandisirwo ayo anofanirwa kuita kuti mabasa avo ave nani, inyaya kwete chete kumutengesi wega asi kune yepazasi mutsara wesangano. . Scratchpad Command inogonesa vatungamiriri veaccount kuti vakurumidze uye nemazvo kugadzirisa mapaipi avo neyavo nyore kushandisa unpace works nzvimbo, kuti vakwanise kudzokera kunovhara mamwe madhiri nekuita zvakakura pane iro bhizinesi.
Nancy Nardin, Muvambi, Smart Kutengesa Zvishandiso
Scratchpad Command rave kuwanikwa kune freemium uye vakabhadhara vashandisi.
Scratchpad Yakabatana Yekushandira nzvimbo
Scratchpad inopa yakabatana nzvimbo yekushanda pakati pekarenda, zvinyorwa zvekutengesa, uye Salesforce. Kekutanga nguva, chero account account, mutengesi wekusimudzira (SDR), kana maneja wekutengesa anoshandisa Salesforce anokwanisa kuwana nekugadzira zvinyorwa, kuwedzera nekuvandudza manyorerwo matsva, uye kugadzira nekugadzirisa mabasa zvakananga kubva pakarenda yavo.
Nekudaro, nzvimbo dzekushandira idzi dzinoda kunetesa uye manyorerwo ekugadzirisa dhata, kumanikidza vatengesi kuti vashandise nguva isingaenzanisike pakuiswa kwedatha pane kutengesa kune vatengi. Muchokwadi, chirevo kubva kuSalesforce chakaratidza kuti vatengesi vemazuva ano vanoshandisa chete 34 muzana yenguva yavo vachitengesa. RevOps uye maSalesOps zvikwata zvinoramba zvichikura zvichishungurudzika sezvo masystem akaumbana pamwe asina kubatana nekwaniso yedata rechokwadi -Salesforce.
More Information Wedzera ku Chrome
Tags: chrome plugingoogle Chromegoogle chrome pluginNancy nardinPouyan Salehpouyan salehisalesforcescratchpadscratchpad rairazvishandiso zvekutengesa zvine hungwaru